I-Beppu Cozy Condominum enethikithi lamahhala le-Onsen! C2
Beppu, Ōita Prefecture, i-Japan
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Nao
Beppu Station 3mins ngezinyawo!
Amathikithi e-Onsen amahhala (abantu abangu-5), indawo yokupaka izimoto yamahhala!
Ikhofi eligazingiwe lasekhaya kanye ne-toaster nakho kuyatholakala!
Ifulethi eli-1 lokulala endaweni enhle, liyindawo ehlangene kodwa ethandekayo enamagumbi ombhede o-1 ahlanzekile,
Igumbi lokuhlala elithokomele kanye negumbi lokugezela elikhulu (ishawa kuphela).
☆Beppu Kitahama Express isitobhi sebhasi sithatha 4mins ngezinyawo
☆100Yen intwasahlobo eshisayo ithatha imizuzu emi-5 ngezinyawo
☆Izitolo ezilula, isuphamakethe ziseduze
※ Ayikho ikheshi (Igumbi lami liku-3F)
※ Kufika ku-5ppl.
Sonke istudiyo sigcwaliswe ngamaphansi amahle futhi sithola ukukhanya okuningi kwemvelo efasiteleni elikhulu. Igumbi elibanzi lizoba likhulu ngokwanele ukuba lingene abantu aba-5.
-- Iqashwe ngokuphelele
-- Isikhala Sekhishi
-- Indlu yangasese
--------------------Igumbi lokudlela--------------------Iza ne:
- Ithebula lokudlela
- Ibhodi le-TV
- I-AC(Ipholile / Yomile / Iyashisa)
---------------------Igumbi lokulala ①--------------------Iza nayo:
- Umbhede ongusayizi oyedwa(imibhede emi-3)
- 1 Umbhede kasofa osayizi ababili
----------Ikhishi----------Ikhishi linehitha yokupheka ye-IH enendawo yokubala yokulungisa nokupheka. Iza futhi:
- Amabhodwe namapani okupheka
- Izitsha, izibuko nezitsha
-----------------------Igumbi lokugeza / Indlu yangasese---------------------Igumbi lokugeza umnyango. Izivakashi azidingi ukugeza kubhavu ngokungafani nezinye izindlu e-Beppu.
- Amathawula obuso ahlanzekile namathawula okugeza
- Izicubu, Iphepha Lendlu yangasese
---------------WiFi yeselula---------------Izivakashi zinikezwa i-WiFi yeselula ukuze zifinyelele ku-inthanethi. Idivayisi ingakhishelwa ngaphandle ukuze ixhunywe phakathi nokuhlala kwabo.
NGENA : 4:00pm~
PHUMA : ~ 11:00am
Ukungena ngaphambi kwesikhathi kanye nokuphuma sekwephuzile ngokuvamile akuvunyelwe kodwa kungase kutholakale kuya ngesimo. Ungangabazi ukungibuza!
※ Qaphela, uma kukhona noma yimiphi imiphumela ekuhlanzeni noma ekungeneni okulandelayo ngenxa yokuphuma sekwephuzile, kufanele ngikukhokhise ngakho.
Izingane ezineminyaka engu-2 nangaphansi zimahhala.
Umndeni onabantwana wamukelekile njalo :)
Kodwa sicela uqaphele izingane ezikhokhiswa mahhala, ayikho imibhede etholakalayo, amathawula noma amalineni. Sicela uzilungiselele wedwa.
Lena yindlu yethu, hhayi igumbi lehhotela.
Ngakho-ke uma ungasebenzisa igumbi kanye nemishini ngokucophelela njengeyakho, wamukelekile!
4.55(49 okushiwo abanye)
4.55 · 49 okushiwo abanye
◉Isitolo esilula, isuphamakethe
Lawson 8mins ngezinyawo
7-11 9mins ngezinyawo
Isitolo sesiteshi se-Family mart JR Beppu　5mins ngezinyawo
マルミヤストア別府駅店(Isitolo esikhulu) 8mins ngezinyawo
Yamada Beppu store 4mins ngezinyawo
Isitolo sekhofi 4mins ngezinyawo
Isitolo se-Ramen 5mins ngezinyawo
Shokujidokoromaeda 4mins ngezinyawo
◉ Izindawo ezinconyiwe zokubona
・ Beppu Ropeway
Izincwajana zitholakala ngesiNgisi, isiShayina, nesiKorea. Ungathola uhambo emoyeni ukusuka ekuphakameni okungamamitha angama-503 ukuya esiqongweni sentaba iTsurumi engamamitha angu-1300. Ngosuku libalele, ungabona iShikoku, ngisho nendawo yaseChugoku eJapane. Ngesikhathi saseNtwasahlobo uzoba nombono omuhle we-sakura ne-Miyamakirishima (i-Rhododendron kiusianum), ehlobo ukubuka kwe-dollar eyizigidi ezingu-10 ebusuku, amaqabunga abomvu ekwindla, nesithwathwa esisiliva ebusika. Inani:Imali Yemoto Yekhebula Abantu Abadala (Isikole esiphakathi nabadala) ukuya nokubuya/1,600yen indlela eyodwa/1000yen Izingane (ezineminyaka emi-4 ubudala ukuya kweyaphansi) uhambo nokubuya/800yen indlela eyodwa/500yen Isaphulelo samaqembu anabantu abangaphezu kwe-15.
・ Beppu Tower
I-rom the observation platform (isitezi se-17) emamitha angu-55 ngaphezu komhlaba, umbono omuhle we-panoramic we-360 degree wolwandle, izintaba kanye nesimusi esivela ezindaweni zokungcebeleka ezishisayo e-Beppu City zihlala zijabulisa izivakashi. Umbhoshongo uwuphawu olukhulu kunawo wonke edolobheni laseBeppu futhi ukhuphukela esibhakabhakeni njengoba ubuka ngobumnene idolobha elishintsha njalo.
I-Oita Fragrance Museum
Uma ufunda kabanzi uzobona ujula, wamukelekile emhlabeni wamakha. Ngicela nikhulise imiqondo yenu ngomlando namasiko ephunga. ※ Sicela ubhalise ereception ukuze uthole izifundo zephunga elimnandi, kanye nephunga elimnandi. Inani:Abadala/500yen University kanye nabafundi besikole samabanga aphezulu/300yen Isikole esiphakathi kanye nabafundi bamabanga aphansi/200yen (Isaphulelo seqembu labangu-20 nangaphezulu)
Ngenxa yomsebenzi, angikwazi ukuhlangana nawe mathupha kodwa uma isikhathi sisihle, ngingathanda ukuhlangana ukuze ngithole ikhofi, isidlo sakusihlwa noma mhlawumbe isiphuzo!
Uma ungithumelela umlayezo, ngizozama ukuphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Sicela ukhululeke ukuxhumana nami nganoma yisiphi isikhathi uma unemibuzo noma inkinga ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Inombolo yepholisi: I-Hotels and Inns Business Act | 大分県東部保健所 | 東保第761号の6-3
Hlola ezinye izinketho ezise- Beppu namaphethelo